नखानुहोस् स्या'उको बीज, हुनसक्छ स्वा'स्थ्यका लागि ख'तरनाक - HPsanchar.com
स’दाबहार फल स्या’उ । भनाई छ, ‘दैनिक एउटा स्या’उ खानुहोस्, डाक्टरकहाँ जानुपर्दैन ।’ अर्थात स्या’उ स्वा’स्थ्यका लागि कति फाइदाजक छ भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ । स्याउको अर्को गुण भनेको, यो जुनसुकै अवस्थामा पनि सेवन गर्न सकिन्छ । बिहान खाली पे’टमा होस् वा खाना खाइसकेपछि वा खानुअघि । कतिपय फलफूल चाहि निश्चित मात्रा र समयमा खानुपर्ने हुन्छ । स्या’उको हकमा यस्तो बन्देज छैन् । स्या’उ स्वादिलो, गुणी फल । औषधिय महत्व छँदैछ । तर, त्यही स्याउको बीज कति ख’तरनाक हुनसक्छ भने त्यसले मृ’त्युको मुखमा पनि पुर्‍याउन सक्छ। स्याउको बिजमा एक यस्तो तत्व पाइन्छ, जो एकदम वि’षालु हुन्छ । यो तत्व पाचन इन्जाइमको सम्पर्कमा आउँछ र त्यससँग मिलेर साइनाइड बन्छ । अमिगडलिनमा साइनाइड र चिनी हुन्छ । जब यो हाम्रो श’रीरमा प्रवेश गर्छ, तब हाईड्रोजन साइनाइडमा रुपान्तरण हुन्छ । यसले बिमार मात्र हुने होइन, ज्यान लिनसक्ने खतरा हुन्छ । हुन त अहिलेसम्म स्याउको दानाकै कारण मृ’त्यु भएको भन्ने खाबर सतहमा आएको छैन । यद्यपी यसलाई कम आँक्नु हुँदैन ।
कसरी यो तत्वले श’रीरमा हा’नी गर्छ ? सा’इनाइड विश्वका केही सबैभन्दा ख’तरनाक वि’षमा एक मानिन्छ । जब यो शरीरमा प्रवेश गर्छ, त्यसले सबैभन्दा पहिला अक्सिजनको आपूर्तिमा स’मस्या ल्याउँछ । अवरोध पुर्‍याउँछ । नतिजा, तुरुन्तै ज्यान जान सक्छ । कति ख’तरनाक ? स्या’उको २ सय बिजले बनेको चूर्ण मानव शरीरका लागि एकदम खतरनाक हुन्छ । यसमा पाइने साइनाइडले म’स्तिष्क र हृ’दयमा तिब्र अस’र गर्छ। यसले मान्छेलाई कोमामा पुर्‍याइदिन्छ । यदि धेरै मात्रामा सा’इनाइडको सेवन गरियो भने तुरुन्तै सास लिन स’मस्या हुन्छ। मु’टुको धड्क’न बढ्न थाल्छ। र’क्तचाप न्युन हुन्छ। मानिस बेहोस हुन्छ। यसको आशिंक सेवनले चाहि चक्कर आउने, पे’ट दुख्ने, वान्ता आउने स’मस्या देखिन्छ ।
खा’ना खाए लग’त्तै ब्रस गर्ने बानी छ ? आ’जैबाट छो’ड्नुहोस्- हाम्रा क’तिपय यस्ता बा’नी हुन्छन्, जसले हाम्रो स्वा’स्थ्यलाई न’राम्रो असर पु’र्याइरहेका हुन्छ। यस्ता सा’धारण बा’नीको ख्याल नगर्दा स्वा’स्थ्यमा गम्भिर समस्या समेत निम्तिने खत’रा हुन्छ । त्यसैले यस्ता बानी परीवर्त’न गर्नु नै राम्रो मानिन्छ । आज हामी आम मानिसले गर्ने केही गल्तिका बारेमा तपाईलाई जानका’री गराउँदै छौँ । यदी तपाईको पनि यस्तो बानी छ भने हाजैबाट हटाउनु उ’त्तम हुनेछ । सुधार गर्नुहोस् यी बानी ।